Meander weMelero, yechokwadi whim yemasikirwo | Kufamba Nhau
Iyo meander yeMelero yakatsanangurwa seyekuda kwechisikigo. Iwe unoziva inonzi meander imwe unopinza bend rworwizi rwupi zvarwo runosiya concave uye convex chikamu chenyika.
Asi, kutaura nezveMelero, iyo curve iyo iyo Alagón rwizi inotadza zvekuti inopotsa yaunza chitsuwa. Chero zvazvingaitika, gadzira yakasarudzika nzvimbo inoenderana zvakakwana nemusango zvakapoteredzwa uye nemasikirwo pazvakanyanya. Kana iwe uchida kushanyira ichi chishongo mudunhu re Cáceres, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Iripi meander yeMelero
2 Zvaunofanira kuita mune meander yeMelero
2.1 Kuona kwemhuka: iko kurira
3 Chidiki chegeology: Meander yakaumbwa sei?
4 Nguva yekushanyira meander weMelero?
5 Chii chekuita uchitenderedza iyo Melero meander?
Iripi meander yeMelero
Sezvatakakuudza, kushamisika kwechisikigo kunowanikwa mu muganho weExtremadura naCastilla y León. Zvikurukuru, iri munzvimbo yeCáceres ye Las Hurdes. Dhorobha repedyo Ríomalo de Abajo, zvakare iri yemasipiti e Morisco mugwagwa.
Naizvozvo, nzira yakanakisa yekusvika meander iri kubva kuRíomalo. Nekudaro, kuti usvike kuguta rino, une mbiri nzira dzemigwagwa. Kana iwe uchifamba uchibva kuchamhembe, yakakodzera ndiyo SA-225, nepo, kana uchizviita kubva kumaodzanyemba, iwe unofanirwa kutora iyo EKS-204. Kamwe muRíomalo, une musango track izvo zvinokutora iwe zvakananga kumeander weMelero.
Zvaunofanira kuita mune meander yeMelero
Zvine musoro, chinhu chekutanga chaunogona kuita munzvimbo meander ndeche Nakidzwa nenzvimbo yayo yakanaka. Kuti uite izvi, yakanakisa nzvimbo poindi ndiyo yekuona inonzi inonzi Imwe yekare, Kubva pane iwe uine akakwana kumberi maonero echisikigo kushamisika.
Asi kushanya kwako kune meander weMelero zvakare kunokupa iwe mamwe akawanda mikana. Nguva pfupi wabva kuRíomalo de Abajo, iwe unowana iyo yakanaka dziva rechisikigo izvo zvinoumba rwizi Ladrillar, kwaunogona kutora yekuzorora yekugezera.
Kuona kwemhuka: iko kurira
Iwe unokwanisa ipapo kutevera nzira iyo inomhanya pakati pemipaini nemiti yematanda kuti usvike pane zvataurwa pamusoro. Kamwe mune izvi, iwe haugone chete kuzonakidzwa neinoshamisa maonero eiyo meander. Iyo zvakare inongedzo poindi yekuona zvisikwa zvakaita seiyo griffon gorala shuramurove nhema kana the gondo rakabvarurwa.
Saizvozvowo, hazvina kukuomera iwe kukoshesa kunwa nondo pamhenderekedzo yeAlagón. Uye kunyangwe, panguva chaiyo, inzvimbo yakanaka yekuona iko kurira. Sezvamunoziva, iri izita renguva iyo mhembwe iri mukati mekupisa uye inoenderana neyekuvhuvhu. Idzo hono dzinoburitsa marita emumvura uye dzinopokana nhunzi dzadzo kutara ndima, zvichipa mukana wechiitiko chakasarudzika mune zvakasikwa.
Iwe unogona zvakare kuda kuenda pasi kune meander pachayo. Mune ino kesi, usati wasvika kuLa Antigua, iwe une forogo iyo inokuendesa iwe zvakananga kune hwaro hweichi chiitiko chechisikigo. Panguva ino, iwe unogona zvakare kunakidzwa yakafara panoramic maonero eiyo Sierra de Béjar.
Kubva kuguta reRíomalo pachayo kune nzira dzinoverengeka dzekukwira dzinokutendera kuti unakirwe nenzvimbo dzinoyevedza dzinoumba meander nenzvimbo dzakatenderedza. Pakati pavo, iyo inonzi Verea de los Aceituneros. Joinha inotaurwa nzvimbo ne Coils uye anenge makiromita makumi maviri. Iwe haugone kuzviita chete netsoka asiwo nebhasikoro uye kunyangwe nemotokari. Asi, chero zvakadaro, iwe unogona kunakidzwa inoshamisa coniferous masango.
El Melero munguva yakaoma
Imwe nzira yakanaka ndeye Varedzi Verea. Icho chiri nyore kwazvo, sezvo chisina huremu hwemakiromita matatu. Inoenda, chaizvo, kubva kuRíomalo kusvika pakuona kweLa Antigua uye zvakare inokupa inoyevedza zvinomera.
Pamwe neavo vekare, unogona kupfuura Chorreón del Tajo nzira, iyo inoguma mune inoshamisa mapopoma; izvo zve La Nhanho de la Mora, umo maunowana zvakavezwa pamatombo senge petroglyph iyo inoipa zita rayo, uye iro re Kunobva La Teja. Muchidimbu, zvimwe zviitiko zvaunogona kuita panguva yekushanya kwako kuMelero meander zviri kubata hove uye kuenda pasi nechikepe kana katani. Dzese dziri munzvimbo isingaenzanisike.
Chidiki chegeology: Meander yakaumbwa sei?
Kunyangwe icho chinonyanya kufadza kunakidzwa nenzvimbo yayo yakasarudzika, zvinodawo kuziva kuziva kuti meander yakaumbwa sei. Kune akati wandei zvirevo zvine chekuita nezvezviitiko zvakasikwa. Asi iyo yakabatana neGeology inoti mavambo ayo ane chekuita nezvipingaidzo pasi. Semuenzaniso, sandbar. Izvi zvinogadzira rwizi rwenzizi, kuvadzivisa, kutsauswa. Uye kukosora kunoita iro basa rasara kugadzirisa iyo inotenderera nzira yemvura.
Nguva yekushanyira meander weMelero?
Chero nguva yegore yakanaka kuti iwe uuye kuzoona meander. Nekudaro, isu tinokupa zano kuti uzviite mumwaka wemafashama erwizi rweAlagón, ndiko kuti, mu chitubu kana kuwa. Icho chikonzero chiri nyore kwazvo: sezvo rwizi rwunotakura mamwe mvura, iyo curve uye chitsuwa icho chainenge chapedzisa chinodiwa zviri nani.
Chii chekuita uchitenderedza iyo Melero meander?
Sezvatakatsanangurira kwauri, kushamisika kwechisikigo uku kuri pakati penharaunda ye Las Hurdes uye kunyanya mudunhu re Morisco mugwagwa. Imba yepurazi iri padyo kana musha mudiki wekumaruwa ndiyo Ríomalo de Abajo, kwaunogona kushanyira kereke yeMukadzi wedu weShungu, iyo inogara chifananidzo chemhandara yezita rimwe chete, musande wedhorobha.
Asi chinoonekera pane idzi dzimba dzekurima dzeHurdan ndiyo chivakwa chakakurumbira. Dzimba dzakavakwa nematombo ematombo uye zvakare matenga akagadzirwa nezvinhu zvakafanana. Sekureva kwenyanzvi, nzira iyi yekuvaka dzimba yakabatana nepalloza yekuchamhembe kwakadziva kumadokero kwePeninsula uye ine pre-yeRoma mavambo, kunyanya Celtic.
Kune rimwe divi, mune mamwe mapurazi ari mukanzuru yeCaminomorisco iwe unogona zvakare kuona zvinonakidza zviyeuchidzo. Semuenzaniso mu Cambroncino iwe une iyo chechi yeSanta Catalina kana Las Lástimas, yakavakwa muzana ramakore gumi nemasere, ingangove chivakwa chakakosha kwazvo mudunhu rese.
Mukupedzisa, iyo meander weMelero inogadzira yakasarudzika uye inoshamisa nzvimbo, iyo yechokwadi whim yechisikigo. Uye, padivi pake, unogona kushanyira dunhu re Las Hurdes, iyo nyika ine zvivakwa zvechinyakare. Haunzwi kuda kuenda kunzvimbo ino ye Extremadura? Iyo nhanho imwe kure.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Getaways Europe » España » Melero meander